Hoaxes na ọkọlọtọ ọkọlọtọ na-awakpo: site na nchịkọta akụkọ, akwụkwọ nchịkọta akụkọ na ntinye aka na New World Order: Martin Vrijland
O yiri ka esiwanye ike ịghọta otú e si egwu egwuregwu ahụ na teknụzụ zuru ụwa ọnụ. Na ụwa nke saịtị mgbasa ozi ọzọ e nwere ụfọdụ ndị malitela inye otuto Donald ụda na ndị ọzọ na-ahụ Putin dị ka nwoke na-alụ agha New World Order. A na-akwadokarị saịtị ndị a na-akpọ ndị na-eyi ọha egwu dị ka ọkọlọtọ ụgha, ma ị hụghị ha na-akọwa na ihe omume nwere ike ịbụ ezigbo ngọngọ. Ọ bụrụ na a ga-enwe nsogbu na ihe omume nke mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, ọ nwere ike mgbe ụfọdụ na ha abụọ maara na agha ebuteghi ma e tinye ya na ọnọdụ. N'ụzọ doro anya, ọ bụ site na nkọwa siri ike na-enwe ike ime nyocha dị mma site na ọgba aghara nke ozi na ịntanetị na ịchọpụta ihe ndị bụ eziokwu, ma echt N'ọtụtụ ọnọdụ, iche echiche n'echeghị ka ọ bụ akụkụ nke uche ụmụ mmadụ, n'ihi ya, ndị mmadụ na-ezu ike mgbe niile na akụkọ mgbasa ozi na mgbasa ozi ma ọ bụ saịtị mgbasa ozi nke mmasị ha.
Ka anyi chee na onodu ojoo bu, dika ima atu, agha agha na-egbu na nso nso a na mpaghara Siria Idlib abughi agha megide ochichi Assad, mana atụmatụ eburu n'obi site na ma West na Russia na mba ndị metụtara ya. "Kedu nwa na-echepụta ọnọdụ dị otú ahụ?", Ị nwere ike iche ugbu a. Nke ahụ ga-apụta na mba abụọ ahụ na-egwu n'azụ ihe nkiri ahụ, mana na oghere anya (mgbasa ozi) na-ebo ibe ha ebubo. Nke ahụ dịtụ iche. Gịnị mere mmadụ abụọ ga-eji na-ebu ọnụ na-ebu ọnụ na-arụkọ ọrụ n'azụ ebe ndị ahụ? Anyị hụrụ ihe atụ kachasị atụ nke a mgbe ọdachi MH17 gasịrị. N'ebe ọdịda anyanwụ na-abịa na akụkọ nyocha sitere na (Ego Machiavelli emeri) OvV Research Council nke na-egosi na rọọlụ Russia BUK ga-agbapụ ụgbọelu ahụ site na mbara igwe. Russia na-agọnahụ nke a, mana esiteghị na arụmụka nke ga - eduga na njedebe siri ike nke nsonaazụ nchọpụta nke Ebe Ọdịda Anyanwụ. Dịka ọmụmaatụ, a pụrụ ịjụ ajụjụ na nnukwu uzo onye mere ka BUK nwụnye ka ọ kwụsị na saịtị ahụ. Ka o sina dị, ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ gbasara ọdachi a nwere ike ịjụ gị ma ọ bụ na e nwere otu nsogbu, dịka akọwawara ya na isiokwu a.
Russia nwere ike ịkatọ West nke mmegide ọkọlọtọ ụgha, ma ọ gaghị egosi na ihe dị mma. Achọpụtaghị ike zuru ezu na enweghị nkwanye ùgwù nke ebubo ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa adịghị ka ọ ga-ewere ọnọdụ. Nke a bụ n'ihi na ọ dịghị mgbe ọ bụ n'ezie ụgha ọkọlọtọ ma ọ bụ hoax? Ọ ga - abụ na ndị ndú ụwa na - eme ka anyị nwee obi ụtọ na ajụjụ iji mee ka ụmụ mmadụ zukọta na ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ a chọrọ? Ndị ka na-eche na Putin (ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna onye Turkey bụ onye ndú Erdogan) na-ahụ site na atụmatụ nke New World Order. O nwere ike ịbụ na ndị ndú a dị ike bụ nanị akụkụ nke map okporo ụzọ na-aga na New World Order? Gịnị mere ha ji efegharị na ntutu isi nke ha na Syria ma gịnịnụ kpatara esemokwu ndị a dị ugbu a ọbụna na ọ dị anyị ka anyị nọ na njedebe nke agha ụwa nke atọ? O nwere ike ịbụ na a na-eme atụmatụ agha ndị a dị oke elu ma na ndị isi ụwa na-arụ ọrụ iro ha iji mezuo usoro a? Nke ahụ yiri ka ọ dị nnọọ oke-nabata.
Nche echiche dialect nwere àgwà nke mkparịta ụka. Ajuju ajuju ajuju nke oma site na n 'onodu di iche na n' uzo. Isi mmalite malitere site na mgbagwoju anya ma ọ bụ nkwenye. Echiche amamihe dị otú a bụ onye ọkà ihe ọmụma Gris bụ Plato. Ka oge na-aga, onye ọkà ihe ọmụma bụ Hegel ga-arụpụta edemede ahụ. Hegel kwuru na ọ bụghị nanị iche echiche, kamakwa eziokwu ahụ nwere usoro ihe ederede ma na-ahazi ya n'ụzọ atọ: ndị a, nyocha en njikọ. Otu ndị a bụ nkwupụta dị mkpa ka a nwaa ma ọ bụ kwadoro. Mgbe ụfọdụ, a na-ederede edemede, na nke ahụ, akwụkwọ edemede ọhụrụ na - ebili (ma ọ bụ echiche). Ya mere, anyi na-akpọ nrube isi nke a nyocha. A na-akpọ agha na mgbasa ozi n'etiti arụmụka si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na-akpọ Hegelian Dialectic. Na njikọ edozi esemokwu ahụ ndị a en nyocha op, site na imekota eziokwu ndi ozo na ha abua. Asụsụ Igwe Hegel dị mfe: mepụta nsogbu; lelee nsogbu na mmetụta ya. Nyezie ihe ngwọta ahụ. Hegelian philosophy na-ekwu na "ihe nile mere eme sitere na esemokwu n'etiti agha ndị agha." Enwere ike ịhụ echiche ọ bụla ma ọ bụ mmejuputa nke echiche ndị a. Nke a ndị a na-akpali mmegide ndị na-emegide, na a na-akpọ nyocha. Ihe ga-esi na ya pụta ga-eme ndị ama ọ bụ nyocha bụ, ma otu njikọ nke abụọ agha.
Igwe okwu Hegelian bụ usoro nke ndị ọkachamara na-achị. A na - eme nsogbu nke amara tupu oge a banyere mmeghachi omume nke ndị mmadụ. N'ụzọ dị otú a, ndị mmadụ ga-anakwere ngwọta a na-eme atụmatụ na nke a chọrọ. Mgbe ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, ihe a chọrọ ka anyị nwee ike ịchọta ikike anyị dị ka ngwọta achọrọ maka nsogbu ha kere onwe ha. Anyị na-akpọkwa nke a na nchịkọta Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta. Iji mezuo nsonaazụ nchọta chọrọ (njikọ) bu uzo agha (ndị a en nchịkọta akụkọ) ụzọ dị mkpa.
Ọ ga - ekwe omume na ndị isi ụwa na - achịkwa ọtụtụ nde ndị nwụrụ anwụ na agha nke ha onwe ha ji aka ụma setịpụ bụ nnukwu nsogbu dịka iwu nke Helectian dialectic of ndị a en nyocha? Ndi mme ukpụhọde emi ẹmekde nnyịn kpukpru ini ke media? Ọ dị mma na ọ bụrụ na ị na-ahụ site n'aka ndị ọchịchị eze ọdịda anyanwụ, ị ka nwere ike iwulite olileanya na onye dị ka Putin ma ọ bụ (maka obodo Turkish) Erdogan. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ha nwere naanị nyocha na-etolite na egwuregwu Hegelian? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị leba anya n'akụkọ ihe mere eme nke President Vladimir Putin, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iche na ọ bụghị akụkụ nke New World Order agenda. Iji malite, a malitere ime na Russia na mmalite nke narị afọ gara aga, n'oge Agha Ụwa Mbụ. Lenin na Lenin na-anọchi ya na-egosi na ọ bụ ụmụ amaala Zionist (gụọ lee nkọwa a); ihe ike anyị nwere ike ikwu na nke a bụ ihe na-agba ọsọ n'azụ atụmatụ New World Order. Ọzọkwa Hitler na ya arụnyere site zionist ego nyocha onye iro Stalin, na-egwu egwuregwu dialectics Hegelian n'isi ọtụtụ iri nde mmadụ nwụrụ. Na ngwọta, na egwuregwu a dị elu nke nsogbu (agha) na mmeghachi omume (njedebe zuru ezu nke ndị bi na ya), bụ ntinye nke United Nations dị ka njikwa ahụ zuru ụwa ọnụ.
Na egwuregwu a nke dialectic Hegelian nke ọbara ndị na-eme pharaoh na-egwuri egwu (lee lee nkọwa a), nke anyi kwenyere dika ndi isi nke mba di iche iche, agha bu uzo a choro ihe a choro. Na agha ahụ ị nwere ndị a en nyocha dị mkpa. O yiri ka a na-egwuri egwu dị ka akwụkwọ akụkọ Hegelian nke ụwa a, nke (maka ndị na-ege ntị) okpukpe dị iche iche nke ụwa na amụma ha yiri ka ọ bụ akwụkwọ edemede (lee ebe a en ebe a). Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ele nsogbu nke asụsụ egwu na esemokwu na-arịwanye elu n'etiti East na West, ị kwesịrị ị na-amụ ike ike onye nwere ike igwu egwu egwuregwu a nke Hegelian dialectics n'azụ ihe ngosi. Ihe mgbaru ọsọ ahụ doro anya: nchịkọta zuru oke nke ihe nile a kpọrọ mmadụ na oge nke njikọ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: henrymakow.com
Mmegbu na ụwa, mana gịnị ka ị ga - eme iji melite ya?
Ihe kpatara na ị ekwesịghị ịtụle (akụkụ 2)
Ndị na-eyi ọha egwu wakporo London 322 (22 March): E mechiri Westminster Bridge na fim
Tags: nyocha, nkwenye, Erdogan, ụgha ọkọlọtọ, agba, Hegel, Hegelian dialectic, hoax, Plato, ede uri, nsogbu, mmeghachi omume, ngwọta, njikọ, ndị a, trump, ụgha ọkọlọtọ, agha ụwa
14 April 2017 na 18: 11
Nke a bụ kpọmkwem ihe ọ bụ na ọ bụ oge ndị mmadụ ga-eteta ma hụ site na aghụghọ a. O siri ike na m maara na ọ na-aga n'ihu na ọtụtụ narị afọ na ya niile pụta. Ma, ọ bụghị oge na-aga ime ka ọdịnihu nke ọgbọ na-abịa n'ọdịnihu pụta ma nwee etolite na nnwere onwe zuru oke. Mwakpo na-abịa site n'ịmata ihe na-eme.
14 April 2017 na 18: 13
14 April 2017 na 18: 31
Iji nọrọ na uwe ojii, 'ezigbo cop, bad cop':
14 April 2017 na 18: 37
N'okwu ndị na-arụ ọrụ ụgha na-arụ ọrụ, e nwere ndị na-eche tankị na òtù ndị dị ike na-eme mkpọtụ na-emeghe ma gosipụta ha. Ma o siri ike onye ọ bụla na-aṅa ntị na ya, ha na-ahọrọ iri nri nke msm (mockingbird) na-enye ha:
14 April 2017 na 19: 00
Toner Talmudic "Mgbalị Talmudic" ????
AJỤJỤ: Ọ bụrụ na ị ga-ahapụ m ka m si n'ezi ofufe dapụ ruo oge ụfọdụ, okwu ndị a nwere mgbe ụfọdụ ọ dị ka ọ na-adịtụghị - (ọchị) - ma ana m enwe ekele dị ukwuu maka mgbalị ndị anyị na-eme iji gbanwee iwu ndị mba America. Ejirila m okwu ise nke okwu ndị ahụ na nkenke banyere igbe ikpeazụ ma ọ bụ karịa. (Ọchị.) Enwere m nnukwu -
MR TONER: Tinye ya.
densie dere, sị:
15 April 2017 na 20: 08
Aga m agwa gị ihe ọma, Martin?
Enweghị NWO .........
Ezigbo Ista chọrọ
na miri omimi nke Kraist ....
15 April 2017 na 22: 26
Nke a bụ onye amamihe amamihe densies.
Ọ ga-amasị m ịnweta bọl kristal dị otú ahụ. Ọ bara uru, mgbe ahụ, ị ​​maara onye naanị ụwa n'ụwa kpọmkwem ihe ga-eme ma ọ gaghị eme. Kedu ihe ga - eme ka ị dị elu karịa onye nkịtị na kọmputa na njikọ intaneti.
Ị na-enyekwa nkuzi? Ka ị na-edetakwa akwụkwọ ndị ị na-ekekọrịta ihe ị maara banyere ọdịnihu?
Ma ọ bụ, ọ bụ ihe nzuzo na ịchọrọ ịkọwa?
Dịka ọmụmaatụ, ana m achọ ịmata ma US ga-ebibi kpamkpam na obere oge.
Biko ị nwere ike imetụ otu akụkụ nke ákwà mgbochi. Kedu ihe na-egosi na NWO ga - abụ ọdịda, gịnị ga - eme nke ga - eme ka NWO ghara ịda?
Alien? bụ Mesaịa ahụ?
Ekele site na otu ọkpa ugbo.
15 April 2017 na 22: 39
Ma ọ bụ ka Ole Dammegard na Jim Fetzer ga-azọpụta anyị, n'ihi na ndị dike ahụ na-eme nke ọma n'okporo ụzọ. Ole fọrọ nke nta ka ọ ghara igbochi ụlọ ọrụ dị na London na Stockholm n'ihi ozi ndị ọ nwetara site n'aka onye nnọchiteanya CIA na-eme enyi ...
16 April 2017 na 08: 52
a na-agba obi ọchị ...
mara onwe gị!
ekele gi maka igosi onwe gi dika ndi oru ugbo di mfe.
ihe niile ga-aga nke ọma ...
ọ bụghị na abụghị m onye amụma, ọ bụghị na anaghị m adị elu ...
anyị bụ 99%
16 April 2017 na 09: 07
ga-achọ ida ...
ajụjụ gị bụ ihe ịma aka ... na cynical ...
ọjọọ maka ahụike gị ....
egwu bụ onye ndụmọdụ ọjọọ
na anaghị m agụ ihe ọ bụla ọzọ ebe a ...
ihere dị otú ahụ ....
16 April 2017 na 16: 19
@densie, ị pụtara onye na-enye ndụmọdụ ???? M na-anụ isi yoga, na-etinye aka na tii na 15 obere oge. Ị kwenyere n'oge ọgbọ ọhụrụ?
Site n'ụzọ ka mma onye ọkpọ ọrụ nke oke ọkpọ karịa onye na-eduhie onye nwe ụlọ ??
Freba dere, sị:
28 April 2017 na 09: 39
N'eziokwu, anyị "nọ jụụ" ruo ọtụtụ puku afọ dị ka mmadụ. N'ihi na engine "n'elu", ụbụrụ gị, arụ ọrụ otu maka afọ 30.000. Naanị anyị na-eyi uwe dị mma karịa akpụkpọ anụ.
Oge Piet Vroon na-ede akwụkwọ dị iche iche n'arụ "Ogbugbu nke Ọkpụkpụ". Ya mere, ọ bụrụ na ị ka nọgidere na-amụ nwa nanị dịka "ọkpọ-ọkpọ nke onye ọrụ ugbo", ọ na-aghọ ọgba aghara. M ghọtara na "MEN" abata. Ịgbasa nje Ebola mgbe ụfọdụ. Hụ otú o si gbadaa.
Mmadụ 9 mmadụ na njedebe nke narị afọ; lee atụmanya. Ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ihe niile ahụ na "Monkey Colonies", ihe agaghị arụ ọrụ. Tolle: "Ihe niile dị". (Na-akwụsị)
16 April 2017 na 19: 30
@densie, ekele maka mmeghachi omume gị.
M na-atụgharị uche? Ee, nke ahụ bụ eziokwu.
Ajụjụ m bụ ihe ịma aka. Ejighi m egwu, Achọrọ m ka ị kọwaa.
Na egwu, nke ahụ dị mma. Ihe kachasị m egwu n'oge a bụ na Ruby, anụ ọkụ anyị, adịghị aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ na chicken anyị 'Madeleine Albright' zọpuru àkwá Ruby ọzọ.
Ihe na-emenye m ụjọ na-emetụkwala okpukpere chi ọhụrụ nke na-agbasa dịka ajọ ọrịa.
Ihe ị na-ahụ dị ka ihe na-adịghị mma, echere m na ọ bụ n'ihi na afọ ọhụrụ bụ Eckard Tolle.
Were ya na onye ọ bụla ga-ada ka Tolle .... ???
Achọghị m ibi n'ụwa dị otú ahụ.
16 April 2017 na 20: 29
@ ibu na PORVH
obi ụtọ Pesach ????
28 April 2017 na 09: 50
Ọ na-amasị m ịba dị ka Tolle. Eea nke dabeere na Buddha. Osisi kasị ukwuu na China bịara n'okpuru ọnọdụ Buddha "ọnọdụ". Anyị na Europe na nke a na-akpọ Free West, a na-eji ụlọ ahịa ndị ahịa ala tụnyere ụdị echiche ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị na-eme ihe dị otú ahụ.
A naghị ebipụ ihe ndị na-adịghị na ya. Naanị lee anya gburugburu gị. Ọ bụrụ na ị maara ya; ọ ga-adị mfe. Njikwa phylogenetic ka dị ụba n'ime anyị.
Anyị na-agbadata mpako anyị na nzuzu. Ma ma ị chọrọ ya ma ọ bụ; ị nwe. N'ezie eziokwu.
16 April 2017 na 17: 18
mma! ọ dịghị m abụghị okpukpe ...
site na mgbe obe ...
Guzo, ya mere ikwu okwu ... Na-egbuke ....
Ihe dị ka Byron Katie na Eckhart Tolle na ọtụtụ ndị ha ...
n'ihi na nke ahụ bụ ihe na-eme ... ndị mmadụ na-eteta ...
m ma dịrị mfe ... na nkwụsị nke obi
" Ụmụaka anaghị egbu gas na-egbu egbu, ma ọ bụ ndị uweojii na-acha ọcha na NATO?
North Korea dị ize ndụ n'ihi na anyị (mgbasa ozi) na-ekwu »
Nleta nile: 13.994.214